Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: ‪#‎OromoProtests‬ Ayyaana iidaa guyyaa roobii iftaanii kabajamu ilaalchisee OPDOn ummatatu nutti
‪#‎OromoProtests‬ Ayyaana iidaa guyyaa roobii iftaanii kabajamu ilaalchisee OPDOn ummatatu nutti
‪#‎OromoProtests‬ Ayyaana iidaa guyyaa roobii iftaanii kabajamu ilaalchisee OPDOn ummatatu nutti fincila jettee waan sodaatteef manguddoota doorsiisuuf akka yaalaa jirtu dhageenyee jirra. Doorsisa isaanii keessa ummanni akka duritti bakka tokkotti akka hin salaanne, akkasumas uffataa aadaa akka hin uffanne kan jedhuudha. Kun heera biyyattiittif mirga ummataa dhiibuudha. Kanaafuu ummanni keenya sodaa takka malee bifa armaan gadiitin kabajachuuf mirga guutuu qaba.
1) Akkuma duritti naannoo naannoon bakka tokkotti dirree iidaatti salaatuun mirga ummataa heeraan eeggameedha.
2) Dhaadannoolee aayyana kanaan walqabatanis ta'ee kan garaa ummataa jiru biroo dhageessisaa deemuun mirga guutuu ummataati.
3) Uffata aadaas ta'e amantii ayyaana san naaf miidhagsa jedhee filate namuu uffachuu mirga guutuu qaba.
4) Lukkeeleen damee basaasaa Wayyaaneetin ergamtu olola isiiitiif jecha jeequmsa kaasuu waan maltuuf of eeggannoo cimaa godhuu feesisa. Of eeggannoo kana keessaa tokko yeroo gara ayyaanaatti deemtan meeshaalee qara qaban kan akka meeshaa waraanaatti laalaman fuutanii deemurra of qusachuu barbaachisaadha.
Bulchiinsi mootummaa aanaleefi poolisiin Oromiyaas ummanni kun nagayaan ayyaana isaa kabajachuu malee kaayyoo biraa akka hin qabne beekuudhaan, tarkaanfilee ummata aarsuufi walitti buusuu danda'anirraa akka of qusatan jabeessinee akeekkachiisuu barbaanna.
Posted by Hasan Ismail at 7:23 PM